Global Voices teny Malagasy » Fatin-kisoa Anarivony No Hita Nitsingevana Teo Amin’ny Reniranon’i Shanghai · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2013 2:23 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Sakafo, Tontolo_iainana
Nahangona fatin-kisoa 3,323  ny roa andro nanadiovana ny renirano Huangpu, izay manasasaka an'i Shanghai. Milaza ny haino aman-jery eo an-toerana fa avy any Jiaxing  ireto kisoa ireto, any amin'ny faritanin'i Zhejiang izany izay nahitana, hatramin'ny niantombohan'ny taona, kisoa miisa 20.000 mahery maty noho ny gripan-kisoa  [zh]. Nanamafy haingana ny mpitondra fanjakana fa tsy nandoto ny famatsiana rano akory izany, raha toa kosa ny vahoaka ka mbola tena mitaintaina mikasika ny loto goavana nateraky ny fahalòvan'ireo fatin-kisoa. Avy any amin'ny ony Yangtze ny reniranon'i Shanghai ary nanambara ny fanjakana fa matin'ny andro mangatsiaka ny kisoa fa tsy otrik'aretina akory. Na izany aza, maro ireo mponina amin'ny aterineto no tsy dia matoky ireo fanambarana ireo.
Nanasa  [zh] ny manampahefana ny Testing Paper (验算纸) mba hanaporofo amin'ny vahoaka fa azo antoka tsara ny rano:
Nilaza ny departemantan'ny Fambolena ao Zhejiang fa ny andro mangatsiaka kokoa aza no nahafaty ireo kisoa nitsingevana teny amin'ny renirano Huangpu noho ny hoe gripan-kisoa. Nilaza ihany koa ny manampahaizana manokana fa tsy voakasika tamin'izany ny hatsaràn'ny rano. Midika ve izany fa azo hanina ireto kisoa maty ireto? Maninona raha andeha homena ny manampahefana ny sasany amin'ny henan'ireo kisoa maty tao amin'ny renirano Huangpu ireo?
Tamba-tsarinà fatin-kisoa teo akaikin'ny renirano Huangpu. Sary avy amin'ny Mpisolovava Gan Yuanchun. Fananam-bahoaka.
Nanontany tena  [zh] i Liu Junluo (劉軍洛）ny amin'ny antony tsy namoahan'ny fanjakana mialoha ny antsipirihany mikasika ireo kisoa maty:
[Andraikitra mikasika ilay tranganà kisoa maty] Raha ny hevitry ny Jiaxing Daily dia otrik'aretina avy any Jiaxing no nahatonga ireo kisoa maty tao amin'ny Huangpu. Tamin'ny volana Janoary, kisoa 10.078 no hita maty tao an-tanàna. Tamin'ny volana Febroary, kisoa 8.325 no maty. Andro vitsy lasa izay, teo amin'ny kisoa 300 teo no maty isanandro. Manohy mandavaka foana aloha ny tanàna hanitrihana ireto kisoa ireto. Hatreto aloha, 1.200 no hita tany anaty rano. Nisy kisoa hafa ve aroso ny olona teny amin'ny latabatra nisy ny sakafony? Maninona ny governenmanta no tsy manaitra ny vahoaka mikasika ity vaovao ity?
Nanampy  vaovao misimisy kokoa avy any an-toerana mikasika ilay loza ny mpampiasa Weibo Changan Xianling (@长安县令):
Maro ny olona no nametraka fanontaniana mikasika ity tranganà fatin-kisoa teo amin'ny renirano Huangpu ity. Ahoana no nahatonga ireo kisoa 3.000 hatrany Shanghai? Matetika izy ireo no mifarana any an-kibon'ny olona. Ny antony dia tsy ela akory izay, dia notsaraina sy nogadraina ny olona izay nivarotra henakisoa avy amin'ny fatin-kisoa. Tamin'ny volana Novambra farany teo, nitsara olona 17 izay nivarotra kisoa maty 77.000 tamin'ny vidiny 8.65 tapitrisa RMB (1.4 tapitrisa dolara) ny fitsarana tao Jiaxing. Nahazo ny didy higadra mandra-pahafaty ireo tena aditoha nahavanona ny loza, Dong, Chen sy Yao.
Maro ny olona nanontany ny antony mahavitsy ny vaovao mikasika ity tranganà fatin-kisoa ity. Nibanjina  [zh] ny fanjakana ho tompon'antoka amin'ity loza ity i @I Am Zuo Anlong (我是左安龙):
Vaovao goavana be hoatr'izany nefa tsy misy manam-pahefana avy amin'ny governemanta mandray andraikitra sy maneho hevitra mikasika ilay loza. Izao isika manana Kongresy roa fa tsy misy solotena azo itokisana. Fa inona no nahazo ity fiarahamonintsika? Mbola nisy zavatra hafa tavela ve ankoatry ny ady fahefana?
Nanakora  ny endriky ny vaovao any Sina i Li Mingseng (李鸣生):
Tsy vaovao ny hoe maherin'ny 2.000 ny kisoa maty niditra tao amin'ny renirano Huangpu. Tsy vaovao ny hoe vahoakan'i Shanghai maherin'ny 20 tapitrisa no misotro lasopy fatin-kisoa nandritra ny tapa-bolana. Ny vaovao dia hoe mahafeno ny fepetra amin'ny rano fisotro nasionaly ny fanambaran'ny Water Supply Bureau any Shanghai mikasika ny hatsaran'ny ranon'ny renirano Huangpu.
Manontany tena  [zh] ny Brother Excellence (卓越兄) ny antony mahatonga ny tsy hisian'ny resadresaka mihitsy eo amin'ny haino aman-jery sosaily hatramin'ny nahitàna ireo fatin-kisoa teo amin'ny renirano Huangpu:
[Vaovao ratsy: nodonin'ny kisoa ny haino aman-jery Shinoa] Manana fitaovana fizaràna vaovao isika, toy ny bilaogy madinika, resaka amin'ny finday, vavahadin'ny tranonkala, hafatra fohy, tranonkala, fahitalavitra, ary gazety. Nefa dia niandry ny fatin-kisoa hanaparitaka ny vaovaon'ny gripan-kisoa izay efa nandripaka kisoa anarivony tany Jiaxing — tsy nisy raha tsy tamin'ny fatin-kisoa nitsingevana nankany Shanghai no nahafantaran'ny vahoaka ny vaovao. Ao amin'ny vanim-potoanan'ny haino aman-jery vaovao, dia mbola miantehitra amin'ny kisoa ihany isika vao mahazo ny vaovao, izany ve tsy mampalahelo?
Te-hahafantatra  [zh] ny marina ny mpandinika ny tontolo iainana Dong Liangjie
Nisarika ny sain'ny maro ity loza ity. Manaitra ny manam-pahefana ny tenako mba hilaza ny marina ary tokony hijery ny antontan'isan'ny fahapoizinana ara-tontolo iainana ny orinasa mpamatsy rano. Aza afenina noho ny Lianghui  ny marina. Aza asetra loza ny fahamarinanao. Raha tsy mandeha amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, mety havesatra be ny hizaka ny vokatr'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/24/46772/
 fatin-kisoa 3,323: http://www.scmp.com/news/china/article/1188204/number-dead-pigs-found-shanghai-river-rises-3323
 noho ny gripan-kisoa: http://jxrb.cnjxol.com/html/2013-03/06/content_618980.htm
 Nanontany tena: http://weibo.com/1300112204/zmWJMBJc9
 Manontany tena: http://weibo.com/1402828774/zmXHjE6fc